Dacwaddii u horraysay ooay dhegaysatay Maxkamad internetka laga furay | Berberanews.com
Home WARARKA Dacwaddii u horraysay ooay dhegaysatay Maxkamad internetka laga furay
Dacwaddii u horraysay ooay dhegaysatay Maxkamad internetka laga furay
Hargeysa(Berberanews):- Dawladda Shiinaha ayaa markii ugu horaysay furay Maxkamad khadka internetka ku shaqaysa oo dhegaysata dacwadaha la xidhiidha internetka sida ay faafisay warbaahinta dawladda Shiinaha.
Maxkamadan ayaa laga furay magaalada Hangzhou waxayna dhagaysatay dacwaddii ugu horaysay oo u dhaxaysay nin qoraa ah iyo shirkad bog internet leh, iyadoo labada dhinac ee ay dacwadda u dhaxaysay ay kumbuyuutarkooda kala socdeen dhegaysiga dacwadda.
Xaakimiinta ayaa marka hore la dhaarinayaa ka hor furitaanka dacwadda, waxaana kaliya ay maxkamadda dhagaysataa dacwadaha xagga rayidka ah sida muranada ka dhasha dukaamadda khadka internetka badoocooyinka kaga iibiya macaamiisha.
Eedeysanayaasha iyo dacwad-qabayaasha si shaqsi ah maxkamadda ugama soo muuqanayaan, ee khadka ayay muuqaal ahaan u soo galayaan, halkaas ayaa lagala socon dacwadda“Internetka waxa uu talaabay xuduudaha muuqda, waxana uu naga caawinayaa in aan waqtiga beekhaamino” ayuu yidhi Wang Jianggiao, Madaxweyne ku xigeenka maxkamaddana.
Sannadkii 2016-kii ayay dowladda Shiinaha bilowdey in ay khadka ka baahiso dacwadaha ka socda maxkamadaha caadiga ah, balse talaabadaasi waxa dhaleeceeyey dadka qaar oo sheegay in in dadka aanay doonaynin in arrimahooda gaarka ah ay dadka kale ogaadan.
Habkan maxkamadda internetka waxa uu ka jiraa dalal kale sida Canada oo kale, halkaasi oo dadka ay dacwadahooda ku xalin karaan arrimaha la xidhiidha wixii ka yar $5,000.
Previous articleWasiirka Maaliyadda oo kormeer ay ku qarinayso hoos u dhaca shaqadii Dekedda Berbera ku tagtay Dekedda
Next articleTixda Miski: Xasan Ganey Nolosha Dhabta ah buu Doortay – W/Q: Rashiid Sh. Cabdillaahi (Gadhweyn)